Horudhaca kulammada horyaalka Serie A ee Kooxaha Bologna vs Inter Milan & Roma vs Napoli | Somali football world
Home SOOMAALI Horudhaca kulammada horyaalka Serie A ee Kooxaha Bologna vs Inter Milan &...
Horudhaca kulammada horyaalka Serie A ee Kooxaha Bologna vs Inter Milan & Roma vs Napoli
(Yurub) 02 Nof 2019. Kulamo waa weyn oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kulammadaas ay ka mid yihiin midka ay Inter Milan booqanayso Bologna iyo sidoo kale kan ay kooxda Roma soo dhoweynayso Napoli.
Kooxda Bologna ayaa Inter Milan caawa oo Sabti ah kula kulmaysa garoonka Renato Dall’Ara stadium kulanka 11-aad ee ciyaaraha horyaalka Serie A.
Bologna ayaa haatan fadhisa kalinta 10-aad ee kala sarreynta horyaalka Serie A iyadoo leh 12-dhibcood, halka Nerazzurri ay ku jirto kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka Serie A, waxaana ay hal dhibic ka dambeeyaan Juventus.
Taariikhda: Sabti, 02 Nof 2019
Garsooraha: Federico La Penna (Italy)
Garoonka: Renato Dall’Ara
Wararka Kooxaha Bologna vs Inter Milan:-
Gary Medel ayaa dhaawac dib uga soo laabtay waxaana uu ku soo bilaaban karaa khadka dhexe ee kooxda Bologna, halka Danilo uu wehlin doono Stefano Denswil kaddib markii la nasiyay kulankii Cagliari.
Dhinaca kale kooxda Inter ayaa la filayaa inay Cristiano Biraghi ku soo bilowdo garabka bidix isagoo bedeli doona Kwadwo Asamoah.
Xaqiiqooyinka Ciyaarta Bologna vs Inter Milan:-
>- Inter Milan ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Serie A.
>- Kooxda Inter ayaa guuleysatay labadaba qeybta hore ee ciyaarta iyo kulanka oo dhammaystiran todoba ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay horyaalka Serie A.
>- Inter ayaan la garaacin 14-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay boqatay naadiga Bologna tartammada oo dhan.
>- Bologna ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool sagaal ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay garoonkeeda kulammada horyaalka Serie A.
>- Inter Milan ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeed ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Serie A ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Kooxda Bologna ayaan la garaacin 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Serie A.
Shaxda Macquulka ah ee labada kooxood Bologna vs Inter Milan ay ku soo geli karaan :-
Dhinaca kale kooxda Roma ayaa soo dhoweynaysa galabta oo Sabti ah naadiga Napoli kulan ka tirsan horyaalka Serie A.
Roma ayaa fadhisa kaalinta afaraad ee horyaalka Talyaaniga iyadoo leh 19-dhibcood, halka Napoli ay ku jirto kaalinta lixaad iyadoo leh 18-dhibcood.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 5:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Stadio Olimpico
Wararka Kooxaha Roma vs Napoli:-
Ciyaaryahanka kooxda Roma ee Cengiz Under ayaa taam buuxa ah, waxaana loo gacan gelin kartaa in lagu soo bilaabo safka hore khadka dhexe ee wax weerara, isagoo ka garab ciyaari kara Nicolo Zaniolo iyo Justin Kluivert.
Federico Fazio ayaa ganaaxan, waxaana la arkaa in Cetin uu kula soo bilowdo safka hore ciyaaryahan Chris Smalling.
Dhinaca kale kooxda Napoli labadeeda xiddig ee Dries Mertens iyo Mario Rui ayaa la filayaa inay ku soo bilowdaan safka hore kulanka galabta, halka Piotr Zielinski lagu wado inuu Allan oo dhaawac ah ka bedelo khadka dhexe.
Kostas Manolas ayaa u tartamaya inuu ku soo bilowdo safka hore kulanka ay ka horjeedaan kooxdiisii hore.
Xaqiiqooyinka Ciyaarta Roma vs Napoli:-
>- Napoli ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 12 ka mid ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Serie A.
>- Roma ayaan la garaacin 18 ka mid ah 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ciyaartay hroyaalka Serie A.
>- Napoli ayaa guuleysatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay meel ka baxsan garoonkeeda kula soo ciyaartay kooxda Roma tartammada oo dhan.
Shaxda Macquulka ah ee labada kooxood Roma vs Napoli ay ku soo geli karaan:-
Previous article“Maafiyada ayaa kahor istaagtay Cristiano Ronaldo inuu ku guuleysto Ballon d’Or, in ka badan inta uu haatan heysto” – Hooyada dhashay laacibka
Next article“Tani Waa Chelsea-dii Ugu Xiisaha Badnayd Ee Aan Mudo Arko, Waxaan Sharad Ku Dhiganayaa In Xataa Hazard Uu Jeclaan Lahaa Inuu U Ciyaaro”.